5 Centimeters Per Second (2007) | MM Movie Store
Animation Drama Family
” ငါတို့တှဟော အကွိမျပေါငျးထောငျခြီအောငျ စာတှအေပွနျလှနျရေးပို့နကွေလဲနှလုံးသားတှကေတော့ တဈ စငျတီမီတာတောငျ နီးစပျမလာခဲ့ကွပါဘူး…”ခယျြရီပှငျ့ဖတျလေးတှေ အပငျပျေါကနမွေပွေငျအထိ ကွှကေတြဲ့အရှိနျကတဈစက်ကနျ့မှာ ငါးစငျတီမီတာနှုနျး ရှိတယျတဲ့…
မွပွေငျကနလှေတျတငျလိုကျတဲ့ အာကာသယာဥျတဈစီးကတော့တဈနာရီကို မိုငျပေါငျး တဈသောငျးရှဈထောငျနှုနျးနဲ့ ကမ်ဘာမွကေ တဖွညျးဖွညျး ဝေးကှာသှားတယျဦးတညျခကျြရှိတဲ့ လားရာတှကေဘယျလောကျအခြိနျတှကွောပါစတေဈခြိနျခြိနျမှာ လိုရာခရီးကို ရောကျနိုငျဦးမှာပဲမဟုတျလား…
ဒါပမေယျ့တဈခြို့ ဦးတညျခကျြမရရောပဲ မြှျောလငျ့ခကျြတဈခုတညျးနဲ့လှတျတငျမိခဲ့တဲ့ ယာဥျတှကေတော့ ဘယျအခြိနျမှာ ဘယျကိုရောကျနိုငျမလဲ…Massage တှေ ထောငျခြီ အပွနျအလှနျပို့နခေဲ့ပမေယျ့နှလုံးသားတှေ တဈစငျတီမီတာလောကျတောငျ နီးမလာတဲ့အခါ…
အခြိနျတှအေကွာကွီးစောငျ့ဆိုငျးခဲ့ရပမေယျ့ မြှျောလငျ့တဲ့သူပွနျမလာတဲ့အခါ…အမြားကွီးကွိုးစားခဲ့ပမေယျ့ ကွိုးစားမှုတှေ အရာမထငျခဲ့တဲ့အခါတှမှောရော…ငါတို့… လားရာမရှိတဲ့ မြှျောလငျ့ခကျြယာဥျတှကေိုလှတျတငျနမေိသလိုပဲမဟုတျဘူးလား..
တဈခါတဈလကေရြငျ လူတှကေကိုယျ့ရဲ့အဝေးကိုမြှျောနရေငျး ဘေးကကိုယျ့ကိုတနျဖိုးထားတဲ့သူတှအေရာတှကေို သတိမထားမိတတျကွဘူးလတေဈဖကျကပွနျတှေးကွညျ့ရငျတော့ခယျြရီပှငျ့ဖတျလေးတှကေ မွပွေငျကိုပဲဦးတညျပွီးတော့သှားနတောလားဒါမှမဟုတျ မိခငျအပငျအကိုငျးအခတျတှဆေီကပဲတဈစက်ကနျ့မှာ ငါးစငျတီမီတာနှုနျးဝေးကှာခဲ့ကွတာပဲလားဘယျသူသိနိုငျမလဲ….
” ငါတို့တွေဟာ အကြိမ်ပေါင်းထောင်ချီအောင် စာတွေအပြန်လှန်ရေးပို့နေကြလဲနှလုံးသားတွေကတော့ တစ် စင်တီမီတာတောင် နီးစပ်မလာခဲ့ကြပါဘူး…”ချယ်ရီပွင့်ဖတ်လေးတွေ အပင်ပေါ်ကနေမြေပြင်အထိ ကြွေကျတဲ့အရှိန်ကတစ်စက္ကန့်မှာ ငါးစင်တီမီတာနှုန်း ရှိတယ်တဲ့…
မြေပြင်ကနေလွတ်တင်လိုက်တဲ့ အာကာသယာဉ်တစ်စီးကတော့တစ်နာရီကို မိုင်ပေါင်း တစ်သောင်းရှစ်ထောင်နှုန်းနဲ့ ကမ္ဘာမြေက တဖြည်းဖြည်း ဝေးကွာသွားတယ်ဦးတည်ချက်ရှိတဲ့ လားရာတွေကဘယ်လောက်အချိန်တွေကြာပါစေတစ်ချိန်ချိန်မှာ လိုရာခရီးကို ရောက်နိုင်ဦးမှာပဲမဟုတ်လား…
ဒါပေမယ့်တစ်ချို့ ဦးတည်ချက်မရေရာပဲ မျှော်လင့်ချက်တစ်ခုတည်းနဲ့လွတ်တင်မိခဲ့တဲ့ ယာဉ်တွေကတော့ ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်ကိုရောက်နိုင်မလဲ…Massage တွေ ထောင်ချီ အပြန်အလှန်ပို့နေခဲ့ပေမယ့်နှလုံးသားတွေ တစ်စင်တီမီတာလောက်တောင် နီးမလာတဲ့အခါ…
အချိန်တွေအကြာကြီးစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရပေမယ့် မျှော်လင့်တဲ့သူပြန်မလာတဲ့အခါ…အများကြီးကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် ကြိုးစားမှုတွေ အရာမထင်ခဲ့တဲ့အခါတွေမှာရော…ငါတို့… လားရာမရှိတဲ့ မျှော်လင့်ချက်ယာဉ်တွေကိုလွတ်တင်နေမိသလိုပဲမဟုတ်ဘူးလား..
တစ်ခါတစ်လေကျရင် လူတွေကကိုယ့်ရဲ့အဝေးကိုမျှော်နေရင်း ဘေးကကိုယ့်ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့သူတွေအရာတွေကို သတိမထားမိတတ်ကြဘူးလေတစ်ဖက်ကပြန်တွေးကြည့်ရင်တော့ချယ်ရီပွင့်ဖတ်လေးတွေက မြေပြင်ကိုပဲဦးတည်ပြီးတော့သွားနေတာလားဒါမှမဟုတ် မိခင်အပင်အကိုင်းအခတ်တွေဆီကပဲတစ်စက္ကန့်မှာ ငါးစင်တီမီတာနှုန်းဝေးကွာခဲ့ကြတာပဲလားဘယ်သူသိနိုင်မလဲ….
Alien Invasion ( 2020 )
The Temptation of Kimono – Link 1
Holy Mother, Please! Nana Ayano – Link 1
One Night Stand – Link 3